Walee Lugtiisuu Iskugu Muujiyay!! - Barcelona Oo Suuqa Ugu Jirta Xiddigii Liverpool Ee Sababta U Ahaa Inay Ka Hadhaan Champions League. - Gool24.Net
May 23, 2019 Apdihakem Omer Adem
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo warramayaa inay doonayso weeraryahanka kooxda Liverpool ee Divock Origi si uu kaabis ugu noqdo weeraryahanka dookha koowaad ee kooxda ee Luis Suarez.
Walow uu ku fashilmay inuu boos ka helo tababare Jurgen Klopp haddana Origi ayaa goolal muhiim ah usoo dhaliyay Reds xilli ciyaareedkan 2018/19.
Goolashaas ayay kamid ahaayeen kuwii guulaha ee Everton iyo Newcastle United ee horyaalka iyo labadii gool ee uu ku kala dhantaalay Barcelona qudheeda si uu kooxdiisa uga xaadiriyo Final-ka Champions League.
Sida laga soo xiganayo wargeyska ree Catalonia ee Mundo Deportivo, Barcelona ayaa si weyn ula dhacday bandhigii uu Origi kala hor yimid isla iyaga kulankaas waxaana ay u rabaan si uu u kaabo Suarez.
Iyadoo la aaminsan yahay in sidoo kale Greizmann uu kusoo wajahan yahay Barcelona ayay haddana kooxdu doonaysaa xiddig No.9 toos ah noqon kara.
Boateng ayay Barca qaab amaah ah kula soo saxeexatay suuqii bishii January si uu u buuxiyo booska kaabista weerarka balse waxa uu ku dhammaystay heshiiska amaahda ah isaga oo aan wax gool ama gool caawin ah samayn sidoo kalena kaliya afar kulan dheelay.
Boateng ayaan marnaba noqonayn mid si joogto ah kula sii jooga Barca balse Origi ayaa noqon kara sababtoo ah inuu kaliya 24 sano jir yahay tayadiisana kusoo muujiyay Liverpool.
Dhinaca kale qoddob layaab leh oo ay wada gaadheen Barca iyo Liverpool ayaa sheegaya in Barcelona ay bixiso 89 Milyan oo dheeraad ah marka laga yimaado lacagta Origi waana heshiis dhex maray labada kooxood wakhtigii ay Coutinho kala iibsanayeen.
Nasiib wanaag qodobkaas Origi ka dhigi lahaa mid kamid ah xidigaha ugu qaalisan taariikhda kubada cagta ayaa Barca ka dhammaanaya sanadka 2020 waxaana ay marka hore Origi ku qaadan karaan amaah.